Madaxweynihii hore ee Zimbabwe oo weli saameyn ku leh siyaasada dalkiisa – Hornafrik Media Network
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa la sheegay inuu door ku leeyahay siyaasada dalkiisa sida uu sheegay Fidelis Mukonori oo ah baadarigii gacan ka geystey sidii uu isu casili lahaa Mugabe.
Father Fidelis Mukonori ayaa sheegay in Mugabe uu dowlada iyo Madaxweynahaba siin doono talo maadaama uu yahay oday waayarag ah.
Mr Mugabe oo 93 jir ah ayaa is casilay Talaadadii aynu ka soo gudubnay kadib markii milatariga uu soo farageliyay siyaasada dalka Zimbabwe.
Hase yeeshee Mr Mukonori ayaa sheegay inuusan xaqiijin karin in hogaamiyihii hore ee Zimbabwe la siiyay lacag gaareysa toban malyan oo dollar si uu xafiiska u baneeyo.
Emmerson Mnangagwa ayaa loo dhaariyay inuu bedelo Mr Mugabe Jimcihii aynu soo dhaafnay.
Father Mukonori oo 70 jir ah kuna dhow Mugabe ayaa sheegay in Madaxweynaha cusub uu talo ugu tegi doono Madaxweynihii ka horeeyay.
Waxana uu tusaale u soo qaatay baadariga qudbad uu jeediyay Mr Mnangagwa munaasabadii caleema saarkiisa.
“Marka uu dhahayo, Mugabe waa aabahay,waa hogaamiyahayga,waa macalinkeyga.”Ma waxaad I dhahaysaa lama tashanayo qofka uu ugu yeeray inuu yahay aabihii,hogaamiyahiisa iyo macalinkiisa? Aniga uma malaynayo sidaa.”ayuu yiri Mukonori
Sidoo kale Mukonori oo ka hadlay xaalada hogaamiyihii hore ee Zimbabwe ayaa sheegay in Mugabe iyo xaaskiisa Grace ay ku sugan yihiin dalka Zimbabwe ayna ka tagi doonin dalkooda.
Hase yeeshee Mukonori ayaa sheegay inuusan ogeyn in malaayiin dollar la siiyay Mugabe isla markaana loo ballanqaaday in aan hantidiisa la taaban doonin haddii uu xilka ka wareejiyo oo uu iscasilo.
Madaxweynaha cusub ee Zimbabwe Mnangagwa oo muddo dheer la soo shaqeeyay Mugabe ayaan laga fileyn in uu wax ka bedelo siyaasadii hore ee uu ku dhaqi jirey wadanka Zimbabwe Madaxweynihii ka horeeyay maadaama uu ka baqayo in haddii dimuqraadiyad ay timaado isla xisaabtan dhacayo.